ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်၏ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသင့်အကြောင်းအဘယ်အရာဖြစ်သည်ဆိုကြ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇွန်. 04 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကလိုပဲသို့မဟုတ်မ, ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာအားဖြင့်သွားလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးမျိုးအသွင်အပြင်အကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်ခွင်တွင်စေ့စပ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးသည်သာမန်အားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသူတစ်ဦး propensity နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဦးတည်အနည်းငယ်ပိုမိုတင်းကျပ်ရှုထောင့်ကြရလိမ့်မည်. သို့သော်ငြားလည်း, သင်နီးပါးသည်သူ၏ရှပ်အင်္ကျီလက်ပေါ် ketchup နှင့်အတူရုံးခန်းမှလာသောလုပ်ဖော်ဖြစ်နိုင်ဟာအလွန်သတိထားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ပါကနြို. ဟုတ်ပါတယ်, ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ခြုံငုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဘာရိုမီတာမဖြစ်သင့်. သို့သော်, သူတို့ကလူတစ်ဦးကိုယေဘုယျအားဖြင့်အသက်တာကိုရိပ်မိရမယ်ဆိုတာပုံဘေးကင်းလုံခြုံအရိပ်အယောင်များမှာ. ဒီအရာရဲ့ extension ကိုအတွက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုဝေမျှလိုသည်အတိုင်းမတူညီတဲ့တိရစ္ဆာန်များအဘို့ဘေးဖယ်သောလူ.
ကိုသတင်းကောင်းကိုခွေးပိုင်ရှင်တွေအလွန်အမင်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ပူနွေးသောနှလုံးနှင့်ကျူးလွန်. နောက်ဆုံးတော့, ခွေး၏စောင့်ရှောက်မှုလုယူခံရဖို့လိုအပ်. သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးခွေးကိုလူတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သူတို့ဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမိုချစ်ခင်ဖြစ်တတ်ကြတာကိုတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ. ခွေးချစ်သူတွေစစမှုကြောင့်အားလုံးပြီးတဲ့နောက်ခွေးအဖြစ်ကောင်းစွာအာရုံစိုက်တွေအများကြီးလိုအပ်သည့်အချက်ကိုမှပိုပြီးတာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်. ခွေးပိုင်ရှင်တွေအကြောင်းတစ်ခုမှာကောင်းသောအရာတစုံတခုအများဆုံးဆသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကစာရေးအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောရိုးသားများမှာ.
ကြောင်ကလူပတ်လည်မှာအလွန်အေးတိအေးစက်ဖြစ်လူသိများခဲ့ကြ. သို့သော်, ထိုသူတို့သည်စသည်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သတ္တဝါအားလုံးဖြစ်ကြပြီးအမှန်တကယ်ချစ်ခင်စုံမက်တပ်မက်. ကြောင်ပိုင်ရှင်များသည်အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများဖော်ကျူး. သူတို့ကမြင့်မားသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားပူးတွဲပါနှင့်အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်၏ဗဟိုဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့နေကြတယ် (သူတို့ကဒီကိုမပြစေခြင်းငှါ, ပေမယ့်). ကြောင်တစ်ကောင်ပိုင်ရှင်ကချိန်းတွေ့ဖို့အဓိကသော့ချက်အာရုံစိုက်များ၏တူညီသောပမာဏကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်.
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အိမ်တအိမ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ငှက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကတကယ်တော့မှန်သည်ဖြစ်စေ ပတ်သက်. များစွာအငြင်းအခုန်လည်းမရှိ. တချို့လူတွေကသူတို့ကသဘာဝကျကျပွုသကဲ့သို့လောက်ကျင်လည်ကျက်ဖို့လွတ်လပ်မှုသူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်တော်၌ငှက်အိတ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏သောငှက်များပေးခြင်းအားဖြင့်လှည့်ပတ်ရပေမဲ့. Bird ကိုပိုင်ရှင်တွေဟာတစ်ကြိမ်မှာဒီလိုအဖြစ်တနေ့သူတို့ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်, များမှာများသောအားဖြင့် Non-conformist setting တွင်တွေ့ရှိခံရဖို့. သူတို့ကလည်းပိုပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စွန့်စားဖြစ်လေ့.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် Non-Animation တ္ထုအဖြစ်နီးစပ်အဖြစ်ငါးများဖြစ်နိုင်. သေချာတာပေါ့, ငါးကိုပန်းကန်လုံးသို့မဟုတ်တင့်ကားငါးရေကူးစောင့်ကြည့်ဖို့ကြီးစွာသောင်. သို့သော်, တကယ့်ကိုငါးများနှင့်များစွာနှစ်လမ်းသွားအပြန်အလှန်အကျိုးပြုရမ. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ငါးများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၌ပျော်မွေ့သောလူများသောအားဖြင့်အများဆုံးထက် quieter များမှာ. သို့သော်, ထိုသူတို့သည်စတခြားလူထက်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ကြပြီးယေဘုယျအားဖြင့်သမားရိုးကျလူ့အဖွဲ့အစည်းစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်မဟုတ်.
ယုန်, hamsters နှင့် guinea ဝက်
ဤသတ္တဝါများသည်သာမန်အားဖြင့်ပိုမိုနုပျိုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကမျက်နှာသာပေးကြသည်. ဟုတ်ပါတယ်, အသေးစားစောင့်ရှောက်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးအရေအတွက်လည်းရှိပါတယ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် furry သတ္တဝါအားလုံး. ဤယေဘုယျအားဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုခံစားပျော်မွေ့လုပ်ဆောင်ပေမယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပထမဦးဆုံးမြေပြင်ကိုစမ်းသပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏. သူတို့ကအစတာဝန်ရှိဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့စိတ်သဘောထားနှင့်အတူနွေးထွေးချစ်ခင်များမှာ. ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိတ်ဆွေတို့ကိုမေတ္တာပြည့်ဝသောပျော်ရွှင်စရာနှင့်ဟာသများမှာ.
အိမ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမလုပ်ခဲ့ဘူးသောသူတို့၏အကြောင်းကိုအဘယ်သို့? တိရစ္ဆာန်များအဘို့မဆိုမေတ္တာကိုအမည်ခံကြဘူးသောသူကိုပင်သူတို့အား? ဒီဥပမာမှာ, ကကျိန်းသေသူတို့နှလုံးအအေးတွေသို့မဟုတ်မေတ္တာပြည့်ဝသောဆက်ဆံရေးကိုစျေးကွက်ထဲတွင်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ. အခြေအနေများတစ်စုံတစ်ဦးကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်အခြားသူများထက်ပိုမိုဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်လို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးပါသည့်အစိတ်အပိုင်းကစား. non-အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုလည်းအလွန်အမင်းအပေါ်သစ္စာရှိနိုင်ပါသည်, တာဝန်ရှိနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့!
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, သင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရည်အသွေးတွေကိုအဘယ်သူမျှမရှိတယ်သူတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်ကဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသည်. ဒီတစ်ချစ်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်၏အမျိုးအစားနှင့်အညီစရိုက်များကိုအဘယ်သူမျှမသတ်မှတ်ထားဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, လုံလောက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်ကိုနှစ်သက်အားအပိုင်ဖွယ်ရှိသည်ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးများနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်သဘောတူညီမှုကိုမရှိသည်ကိုပြသနိုင်ဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်. မည်သို့ပင်အိမ်မှာကိုစောင့်ရှောက်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏, ဆက်ဆံရေးနေဆဲနှစ်ခုအဖွဲ့များမှလူများအကြားနှစ်ဦးတန်းတူအစိတ်အပိုင်းများပေါင်းခြင်းနှင့်တူသည်.